Pane Chitendero Chaungavimba Nacho Here?
Kana wakamboodzwa mwoyo nechimwe chitendero, ungaomerwa nokuvimba nechimwezve chitendero. Asi iva nechokwadi kuti pane chitendero chaunogona kuvimba nacho. Paaiva panyika, Jesu akaunganidza boka revateveri vake vakatendeka, ndokuvadzidzisa kuti vararame vachitevedzera mitemo yaMwari. Kuchine vateveri vaKristu vakatendeka, vanoedza nemwoyo wose kurarama vachitevedzera mitemo yechiKristu. Ungavawana kupi?
Estelle ambotaurwa mune imwe yenyaya dzapfuura anoti: “Ndakazotanga kudzidza Bhaibheri pandakatanga kudzidza neZvapupu zvaJehovha. Hazvina kunditorera nguva kuti ndinzwisise Johani 8:32 iyo inoti: ‘Muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai.’”
Ray ambotaurwa anoti: “Pandakadzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha ndakasvika pakuziva kuti Mwari haasi iye ari kukonzera kutambura kwevanhu. Ndakafara kudzidza kuti kunyange zvazvo Mwari aine chikonzero chakanaka chokurega uipi huripo, ari kuvimbisa kuhupedza munguva pfupi iri pedyo.”
Hapana mubvunzo kuti kuva netsika dzakanaka munyika ino ine vanhu vakawanda vasina unhu, kwakaoma sokushambira uchienda kuri kubva mvura. Asi zvinokwanisika. Vanhu vakawanda vanoda kubatsirwa kuti vanzwisise uye vatevedzere zviri muBhaibheri. Ndokusaka Zvapupu zvaJehovha zvichidzidza Bhaibheri nemamiriyoni evanhu mudzimba dzavo pasina mubhadharo. Vhiki yoga yoga, vanhu vakawanda vari kudzidza zvinodzidziswa neBhaibheri. Nokudaro, vari kuswedera pedyo neMusiki wavo, uye vari kurarama upenyu hunofadza. *
Wadii kubvunza Zvapupu zvaJehovha kuti nei vachivimba nechitendero chavo?
Pauchaonana neZvapupu zvaJehovha nguva inotevera, wadii kuvabvunza kuti nei vachivimba nechitendero chavo? Ongorora dzidziso dzavo uye nhoroondo yesangano ravo. Chibva wazvisarudzira woga kuti pane here chitendero chaungavimba nacho.
^ ndima 5 Kuti uwane mamwe mashoko, ona bhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Pane chitendero chechokwadi chimwe chete here? Inzwa zvinhu zvishanu zvinoratidza chitendero chechokwadi.
Wakambova nekapfungwa kekuti, ‘Handina nguva yacho,’ kana kuti ‘Ndinotya kuzokunyeperai’ here?